Solae dimy - Wikipedia
Ny Solae na Solae dimy dia ilazana ireo andian-teny latina miisa dimy izay andry na filamatry ny protestantisma sy ny kristianisma evanjelika momba ny famonjena, izany hoe ireo no ainga fototra iorenan'ny famonjena ny olombelona. Ny andian-teny tsirairay dia samy manomboka amin'ny mpamari-toetra latina hoe solus izay midika hoe "tokana", "irery". Ireto avy ireo Solae ireo: Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus Christus ary Soli Deo gloria.
1 Ireo Solae dimy
1.1 Sola scriptura
1.2 Sola fide
1.3 Sola gratia
1.4 Solus Christus
1.5 Soli Deo gloria
Ireo Solae dimyHanova
(Jereo: Sola scriptura)
Ny hoe Sola scriptura, izay adika amin'ny teny malagasy hoe "Soratra Masina irery ihany" dia midika fa ny Baiboly irery ihany no fahefana fara tampony sady tokana tsy maintsy ankatoavin'ny Kristiana sy ny Fiangonana hanorenany ny finoany sy ny fiainana maha Kristiana azy. Ny toriteny ataonan'ny mpanao raharaham-piangonana voaofana, indrindra voaofan'ny Fanahy Masina, no manazava ny Soratra Masina. Amin'ny alalan'ny hafatra ampitainy no amaritany fitsipi-piainana izay ahatakarana sy iasan'ny andraikitry ny tsirairay.
(Jereo: Sola fide)
Ny hoe Sola fide, izay adika hoe "Finoana irery ihany", dia midika fa ny asa tsara ataon'ny olona dia tsy mandray anjara amin'ny fanavotana azy. Ny finoana lazaina eto dia ny finoana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy mitondra fanavotana teo amin'ny hazofijaliana noho ny fahotan'ny olombelona. Mamerina ny fihavanan'ny olombelona amin' Andriamanitra ny finoana izay hany fomba ahafahana mahazo famonjena. Ny finoana irery ihany fa tsy ny foto-pampianarana (latina: doctrina) na ny asan'olombelona. Tsy mitovy ny fomba mahatonga io finoana io ao amin'ny olona tsirairay ka mety miseho tampoka izany na miandalana.
(Jereo: Sola gratia)
Ny hoe Sola gratia, izay adika hoe "Fahasoavana irery ihany", dia midika fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany, izany hoe amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mendrika ny famonjena azony avy amin' Andriamanitra ny olombelona, nefa nomen'Andriamanitra azy maimaimpoana amim-pitiavana izany. Ny maha izy azy ny olona iray eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fitiavany an'Andriamanitra na amin'ny toetra tsara ananany na ny fahamendrehany na ny toerany eo amin'ny fiarahamonina.
(Jereo: Solus Christus)
Ny hoe Solus Christus, izay adika amin'ny teny malagasy hoe "Kristy irery ihany", dia manambara fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia tsy maintsy mandalo amin'i Kristy mivantana sy amin'ny alalany irery ihany. Izany dia midika fa i Jesosy Kristy no hany mpanelanelana fa tsy ny mpitondra fivavahana. Ny hoe Solus Christus dia manambara fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia tsy amin'ny alalan'ny fanelanelanan'ny andrim-pivavahana (latina: institutio) na ny olomasina na ny sisan-javatra navelan'ny maty (latina: reliquiae).
Soli Deo gloriaHanova
(Jereo: Soli Deo gloria)
Ny hoe Soli Deo gloria, izay adika amin'ny teny malagasy hoe "an'Andriamanitra irery ny voninahitra" dia midika fa Andriamanitra irery ihany no masina, manana ny fomba maha Andriamanitra azy fara tampony. Tsy tokony hisy fanompoam-pivavahana atao amin'olombelona na aiza na aiza, na maty na velona izany olona izany; tsy tokony hisy fanompoam-pivavahana atao amin-javatra hafa, na amin'ny sary. Eny fa na ny mofo sy ny divay, izay misolo ny vatana sy ny ran'i Kristy ao amin'ny fanasan'ny Tompo, dia tsy anaovana fanompoana na fitsaohana satria samy fanomezan'Andriamanitra ny mofo sy ny divay, sahala amin'ny zavatra hafa rehetra. Na ny Baiboly aza dia tsy ivavahana na dia mihaino ny famakiana azy amin-pifantohana ny mpino.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Solae_dimy&oldid=971715"
Dernière modification le 30 Jiona 2019, à 15:02
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2019 amin'ny 15:02 ity pejy ity.